VaChamisa Vanoti Chitima Chavo Hachimiswe neMatare eDzimhosva
Chikumi 27, 2020
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanoti havasi kuzodzokera shure muhurongwa hwavo hwekuunza shanduko muZimbabwe kunyange hazvo matare edzimhosva ari kupa mitongo inoodza moyo yevatsigiri vebato ravo.
Vachitaura neStudio7, VaChamisa vati vari kuenda kumatare semonongedzo wekuti bato ravo rinoremekedza mitemo yenyika kunyange hazvo matare aya ari kupa mitongo isiri kufadza vatsigiri vebato ravo vakawanda.
Mashoko aVaChamisa anotevera mutongo wedare repamusoro iro rakati nemusi weChishanu, muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House, uyo waimbonzi Harvest House, unofanirwa kunge uri mumaoko eMDC iri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe.
Asi VaChamisa vanoti kunyange hazvo matare akapa mutongo wakadai, chokwadi chiripo ndechekuti muzinda uyu ndewebato ravo uye izvi zvichabuda pachena nekupindana kwemazuva.
VaChamisa vanoti bato ravo richakasimba uye rinozviziva kuti Zanu PF iri kushandisa paramende kudzinga nhengo dzavo.
VaChamisa vanoti vakapinda musarudzo seMDC Alliance, nhengo dzavo dzikapinda muparamende pasi pezita rekuti MDC Alliance, nokudaro zvinhu zviri pachena kuti Zanu PF iri kushandisa Muzvare Thokozani Khupe kudzinga nhengo dzavo asi nhengo idzi dzisiri dzebato raMuzvare Khupe.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reZanu PF kana raMuzvare Khupe panyaya iyi.
Asi VaChamisa vanoti hurumende yeZanu PF inotya bato ravo nekuti vakakunda mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2018.
Asi dare reConstitutional Court rakabuda nemutongo wekuti VaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika sekuziviswa kwazvakaitwa neZimbabwe Electoral Commission.
Asi VaChamisa, avo vakava sachigaro wevechidiki wekutanga pakaumbwa MDC muna 1999, vanoti ndivo vakakunda musarudzo iyi.
"Zimbabwe Electoral Commission yakagara sedare re nomination court ikatambira nhengo dzeMDC Alliance dzaikwikwidza, ikatambira iniwo semunhu aimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika. Nhasi vodzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende? Chokwadi vanochiziva uye tichazivisana hedu nekufamba kwenguva," vadaro VaChamisa.